नजिक न्युज | एमाले खप्तड छेडेदह गाउँ कमिटीको चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक (पूर्ण पाठ सहित)
वडा केन्द्र पुग्ने सडक कालोपत्र गर्ने देखि एक घर एक रोजगारी दिने
बाजुरा : नेकपा एमाले खप्तड क्षेडेदह कमिटीले स्थानीय तथ निर्वाचन २०७९ को चुनावी प्रतिवद्वता सार्वजनिक गरेको छ । खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिकामा हाम्रो उम्मेदवारी, सामाजिक न्याय समानता र समृद्धिको जिम्मेवारी भन्ने मुल नाराका साथ एमाले खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिकाले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्वता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवद्धता पत्र एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य बसुन्धरा रोकाया, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य लालबहादुर ओली, गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार दिलबहादुर रावत, उपाध्यक्षका उम्मेद्वार मन्देवी ओली, गाउँ कमिटी अध्यक्ष गोपाल बुढा लगायत नेताहरूले सामुहिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एमाले खप्तड क्षेडेदह गाउँ कमिटीले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार गरेको प्रतिवद्वता पत्रमा गाउँपालिकामा २ वर्षभित्र सवै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा र ई पुस्तकालय संचालन गर्ने, स्नातक तह सम्मको क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा १ देखि आधारभुत तहको शिक्षा प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।
त्यसै गरि गाउँपालिकामा निर्माण संरचनालाई व्यपस्थित गर्ने र निर्माण पूरा नभएका संरचनाहरूलाई २ वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिबद्धता पत्र अनुसार गाउँपालिकाले प्रतेक वर्ष २ जना डाक्टर, २ जना ईन्जिनियर, २ जना स्टाप नर्स र २ कानुन पढाउने भएको छ ।
गाउँपालिका भित्र ५ वर्ष मुनिका बालवालिका र ८० वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको स्वास्थ्य विमा र विशेष रोगको निशुल्क उपचार गर्ने, वर्षको २ पटक विषेशज्ञ शिविर र २ महिनाको एक पटक स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने प्रतिवद्वतामा उल्लेख गरेको छ ।
एमाले खप्तड क्षेडेदह गाउँकमिटीले गाउँपालिकामा २४ सै घण्टा संचालन हुनेगरि एम्बुलेन्स सेवा, काँडा र आर्टिचौरमा ल्याव सेवा र पालिकाको केन्द्र डोगडीमा चिकित्सक सेवाको विस्तार गर्ने, पालिकामा १० सैयाको अस्पताल निर्माण गरि संचालनमा ल्याउने र गाउँपालिकाका अति विपन्न प्रतेक घरधुरीमा धुँवारहित सुधारिएको चुल्हो जडान गरिने छ ।
त्यसैगरि गाउँपालिका भित्र रहेका अतिविपन्न, अपांग, एकल महिला, टुहुरा, असहाय र फरक क्षमता भएका व्यक्तिको परिचयपत्रका आधारमा निशुल्क उपचार गर्ने, गाउँपालिकाका सवै नागरिकलाई विमामा जोडेर निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने एमाले खप्तड क्षेडेहुदहले प्रतिवद्वता पत्रमा राखेको छ ।
१ सय १३ बुँदा लामो प्रतिवद्वता पत्रमा पाँच वर्षभित्र गाउँपालिकाका सबै वडाको केन्द्रसम्म पुग्ने गरि कालोपत्रे सडक विस्तार गर्ने एमाले खप्तड क्षेडेदह गाउँ कमिटीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्वता पत्रमा समेटेको छ ।
यस्तो छ गाउँ कमिटीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्र
आदरणीय खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाबासी आमा–बुबा, दिदी–बाहिनी, दाजु–भाइ, शुभेच्छुक सबैमा हार्दिक नमस्कार एवम् अभिवादन तथा नयाँ बर्ष २०७९ सालको मंगलमय शुभकामना छ । २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) को तर्पmबाट निम्न प्रतिबद्धताका साथ उम्मेद्वारी पेश गरेका छौं ।
१ माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोगमा जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली जनताको निर्विकल्प राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति बनेको छ । वि.सं. २०५१ र २०७४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएका दूरगामी कार्यक्रमले नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको इच्छा, सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षा
२ शिक्षण कर्मलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरिने छ । बार्षिक कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी, पुरस्कार र प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । हरेक माद्यमिक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक, साँस्कृतिक शिक्षकको व्यवस्था र सबै आधारभूत विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । यस पालिकामा भर्ना गरिएका स्वयम्सेवक शिक्षकलाई योग्यता र आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत पूर्ण शिक्षकमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
३ समुदायको सहभागितामा प्रारम्भिक बाल विकास र बाल केन्द्रित सिकाइ प्रक्रियामा जोड दिइने छ ।
४ सबै विद्यालयमा ईन्टरनेटको पहुँच पु¥याइ दुई वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा ई–लाईबे्ररी र कम्प्यूटर शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ । स्नातक तहको क्याम्पस र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालीम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
५ दशरथ मा.वि. मा संचालित खाद्यवाली प्राविधिक धारको लागि प्रयाप्त जग्गा प्राप्त गर्ने र विद्यार्थीलाई पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुने अवसर सृजना गरिनेछ । माद्यमिक विद्यालयहरुको सम्भाव्यताका आधारमा सूचना र प्रविधि, ईन्जिनियरिंग लगायतका प्राविधिक धार थप गरिनेछ ।
६ आधारभुत तहमा अँग्रेजी माध्यमबाट कक्षा शिक्षणको व्यवस्था गरिने छ । अन्तर विद्यालय शिक्षण सिकाइका विद्यालयहरुको अन्तर भ्रमण अनिवार्य गराइने छ ।
७ निर्माण भएका विद्यालय संरचनालाई थप व्यवस्थित र निर्माण बाँकी संरचना दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
८ स्थानीयस्तरमै दक्ष र योग्य जनशक्तिको उपलब्धताका लागि पालिकाले चिकित्सा शिक्षामा दुई जना, ईन्जिनियरीङ्गमा दुई जना, कानुनमा दुई जना र स्टाफ नर्समा तीन जना स्टाफ नर्स अध्ययनका लागि नीति तयार गरी आर्थिक सहयोग गरिनेछ ।
९ संविधानको व्यवस्था अनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुःल्कलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ
१० सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि बार्षिक बजेटको २० प्रतिशतले लगानी बृद्धि गरिनेछ ।
सात्विक खाना, नियमित व्यायाम, योग र ध्यान–खुसी मन, सृजनशील दिमाग र स्वस्थ जीवन
११ रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोगको बाटो छेक्न स्वस्थ र पोषिलो खाना, व्यायाम, ध्यान, योग, मनोविमर्श सेवा जस्ता जिवनशैली अपनाउन समुदायस्तरमा शिविर र नियमित कक्षा, टेलिमेडिसिन सेवा संचालन गर्ने सिप र ज्ञान विकास गरिनेछ ।
१२ गर्भवती, ५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र विशेष रोगको निशुःल्क उपचार गरिने छ ।
३ एम्वुलेन्स सेवा मार्फत प्रसूति केन्द्र सेवा, आपतकालिन उपचार सेवामा पहुँच पुर्याइने छ । सबै सुत्केरी केन्द्र, स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा र डोगडी स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक सहित स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चित गरिने छ ।
१४ बालबालिका र महिलामा देखिने कुपोषणको अन्त गर्न पोषिलो भोजन, स्वस्थ ज्यान अभियान संचालन गरिने छ ।
१५ घरभित्रको धुवाँबाट हुने रोगबाट बच्न सुधारिएको चुल्होमा विशेष अनुदान र सहयोग गरिनेछ । के.पि.ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्माण शुरु गरिएको गाउँपालिकामा १० शैयाको निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्र पूरा गरी सेवा संचालन गरिनेछ ।
१६ सबै विद्यालयमा तीन–तीन महिनामा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिनेछ ।
१७ नियमित स्वास्थ्य विशेषज्ञ शिविर संचालन गरिनेछ । आवश्यकताुनसार घरमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । आर्थिक अभावकै कारण दीर्घकालिन रोगबाट पीडित नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पालिकाले गर्नेछ ।
१८ अति विपन्न समुदायका अनाथ, असहाय, टुहुरा, एकल महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको परिचय¬–पत्रको आधारमा निशुःल्क उपचार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
१९ अव्यस्थित मदिरा बिक्री–वितरणलाई नीतिगत नियमन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राजस्वको दायरामा ल्याइने छ ।
२० युवा समुदायलाई सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका कुलतबाट जोगाई स्वस्थ जीवन जीउन शिक्षा र संचेतनामुलक अभियान संचालन गरिनेछ ।
२१ बालबालिकालाई पत्रुखानाबाट हुने शारिरीक र मानसिक हानीबाट जोगाउन यस्ता बस्तुको बिक्री–वितरणलाई नियमन गरिनेछ ।
वडावडा सबै टोलमा सडक घुमाउने, कति सुन्दर छेडेदह मनै रमाउने
२२ पाँच वर्षमा हाल संचालनमा रहेका सबै सडक पीच गरिनेछ ।
२३ तीन वर्ष भित्र प्रदेश सरकारकै गौरवको योजनामा परेको सिंडा–जयवागेश्वरी–गुदुखाती–डोगडी–आटीचौर–मार्तडी दुई लेन सडकको निर्माण संघ र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य पूरा गरिनेछ । सिंडा–मार्तडी सडक किनारमा उखु, अम्लीसो, केरा आदि खेती सुरु गरिने छ ।
२४ चार बर्षमा आटिचौर देखि डोगडीसम्मको सडकमा पर्ने पाँच वटा खोला (आटीचौर, ओलीगाउँ घट्टेखोला, लमगाउँ घट्टेखोला, भुजन्गाड, सिमगाड), माडीखोला, पुडाबाब्ला–चास्ला जोड्ने र काँडा कचालीगाडमा पक्कीपुल निर्माण थालनी गरिनेछ ।
२५ दुई वर्षमा पालिका भित्रका सबै पर्यटकीय स्थलमा सडक बाटो र पैदल बाटो निर्माण गरिने छ ।
कृषि, वन, वातावरण र पशुपालन
२६ ‘एक गाउँ एक उत्पादन, एकीकृत कृषि¬–वन र पशुपालन’ कार्यक्रम लागू गरिने छ । नगदेवाली, उत्पादनमुलक पशुनश्ल विकास, व्यवसायिक कृषि उत्पादन प्रशोधन र संस्थागत बजार व्यवस्थापन गरिने छ ।
२७ सिचाईंको व्यवस्था गर्ने र सिचाईंको संभावना नभएको स्थानमा कम पानीले उत्पादन हुने वालीको विकास गरिने छ ।
२८ कृषि उपजमा अनुदान र बजारको सुनिश्तिता गरी कृषि व्यावसायलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
२९ घर वरिपरी फलफूल र तरकारी सहितको हरियो आँगन अभियान सञ्चालन गरिने छ । सम्भाव्यताका आधारमा पकेट उत्पादनक्षेत्र विकास गरिनेछ । दुई वर्ष भित्र तरकारी, कुखुरा र मासुमा आत्मनिर्भर खप्तड छेडेदह गाउँ बनाईने छ । कृषि उत्पादन, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
३० वडा नं. १ र २ को लसके–चुल्ठे क्षेत्रलाई पशुनश्ल विकास र हिमाली फलफूल खेती, वडा नं. ३ मा केरा, अम्बा र अमला खेतीको प्रबद्र्धन गरिनेछ । वडा नं. ४, ५ र ७ मा आलु वाली र लसुन खेती विकास क्षेत्र बनाइने छ । वडा नं. ६ मा मसला खेती र अमीलो जातको फलफूल खेतीको पकेटक्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । पालिकालाई आलु र लसुन खेतीको बीउ भण्डारका रुपमा विकास गरिने छ । बार्षिक कम्तिमा एक करोड बढीको कृषि र वनजन्य उत्पादन निर्यात गरिने छ ।
३१ जनताको आयस्तरमा बृद्धि गर्न र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न पालिका भित्रै मसला उद्योग र बीऊ बैंकको स्थापना गरिने छ ।
खप्तड घुमी छेडेदह, बडालेक चुम्न–पर्यटकलाई स्वागत गर्छौं आर्थिक विकास गर्न
३२ एकीकृत पर्यटन विकास योजना तयार गरिनेछ । तीन बर्षमा चौध वटा समुदायमा आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकका लागि होमस्टेको विकास गरिने छ ।
३३ चार बर्षमा खप्तड–चुल्ठेक्षेत्र–छेडेदह–बथानलेक–वहित–वडालेक घोडासफरी मार्ग निर्माण गरिने छ ।
३४ वार्षिक ३५ जना युवाहरुलाई पर्यटन गाईड तालीम, हस्पिटालिटी लगायत पर्यटन व्यवसायका आधारभूत सीप विकास गरी स्वःरोजगारका अवसर सृजना गरिनेछ ।
३५ खप्तड–रारा यात्रालाई व्यवस्थित गर्न संरचना विकास र बिस्तारमा विशेष जोड दिइने छ । छेडेदह तालको महिमा बढाउन विकास गरिने छ ।
३६ दुई वर्ष भित्र वडाालेकबाट प्यारागलाइडिंग सेवा संचालन गरिने छ ।
कर्मशील हात, परिश्रमी मन–विकासमा युवा लगाउ तन
३७ युवालाई आत्मानिर्भर बनाउन कृषि र सहकारीताको माध्यमबाट व्यावसायिकतातर्फ उत्प्रेरित गरिने छ । रोजगारीमा महिला र दलित समुदायका युवाको विशेष सीप विकास गरिनेछ ।
३८ लोकसेवा, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका सेवामा प्रवेश गर्न तैयारी कक्षाहरु संचालन गरिने छ । युवाहरुको क्षमता, सीपका आधारमा रोष्टर तयार गरी अवसर प्रदान गरिनेछ ।
३९ उद्यमी युवालाई विशेष आर्थिक, प्राविधिक सहयोगको प्याकेज लागू गरिनेछ ।
४० विदेश जाने युवा जनशक्तिलाई गाउँकै विकासमा लगाइने छ । विकास निर्माणमा युवा सहभागिता बढाई स्थानीयस्तरका सबै विकास निर्माणमा काममा युवा परिचालन गर्ने नीति लिइने छ ।
४१ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर पालिकाले थप बजेटको व्यवस्था गरी प्रत्येक परिवारलाई वार्षिक एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चत गरिने छ ।
४२ परम्परागत सीप (छाला, आरन, पन्चे बाजा, हाते सामग्री तयारी आदि) को संरक्षण र आधुनिकीकरण गरी आम्दानीको स्रोत बढाइने छ ।
भौतिक सुधार र निर्माण
४३ नयाँ निर्माण हुने सबै भौतिक संरचना बालमैत्री, लैङ्खिकमैत्री, अपांगमैत्री, भुकम्प प्रतिरोधक हुनेछन् । दुई बर्ष भित्र सबै विद्यालय भवनहरुको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
४४ सबै खोलामा आवश्यकतानुसार झोलुंगे पुल निर्माण कार्य पूरा गरिनेछ । सबै वडाका केन्द्र र टोलवस्तीमा पुग्ने सडक निर्माण गरिने छ ।
४५ प्राविधिकको सिफारिस बाहेक सबै निर्माण कार्यमा मानवस्रोत परिचालन गरिनेछ । भू–वनोटको प्राविधिक विश्लेषण गरेर मात्र निर्माणका ठूला उपकरण प्रयोग गरिनेछ ।
खानेपानी र सरसफाई, सफा चर्पी, सफा चुलो, स्वच्छ पिउने पानी–चारैतिर सफासुग्घर, स्वस्थ जिन्दगानी
४६ तीन बर्षमा पूर्ण सरसफाई, सबै समुदाय र घरमा शुद्ध पीउनेपानीको आपूर्ति गरिने छ । सबै समुदाय र घरमा शुद्ध पीउनेपानीको आपूर्ति गरिने छ । एक घर एक धारा अभियान यसै वर्षबाट सुरु गरिने छ ।
४७ दुई वर्ष भित्र प्रत्येक वडा र स्थानीय बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र खानेपानीका धारा निर्माण गरिने छ ।
घर–घरमा झलमल बिजुली हुन्या, उद्यम चलाई गरिबी भगाउन्या
४८ दुई वर्ष भित्र सबै वडा र घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको विद्युत सेवा आपूर्ति गरिने छ ।
४९ विद्युतलाई उद्यमसँग जाडिने छ । साना उत्पादन र प्रशोधन तथा प्याकेजिंगमा जोड दिइनेछ ।
प्रकोप पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य एवम् जोखिम न्युनिकरण
५० चार बर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वडा नं. ४ को गुइवन, वडा नं. ७ को गुम्लागाउँ र वडा नं. ६ को नाइनाको बस्ती सुरक्षा गर्ने कार्य थालनी गरिने छ ।
५१ डोगडी लगायतका स्थानमा बाढी–पहिरोबाट जोखिममा रहेका क्षेत्रको संरक्षण, प्रभावित समुदायको सुरक्षा र सुरक्षित वसाइ तथा जीविकोपार्जनका वैकल्पिक उपाय अपनाईने छ ।
५२ खुला स्थानमा बृक्षारोपण, सामुदायिक र निजी वन विकासका लागि कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिनेछ ।
५३ छेडेदहको जलाधार संरक्षण गर्न छेडेदहमा रहेको जग्गा सम्बन्धित कृषकको नाममा दर्ता गर्न सकिने वा वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी सरोकारवाला समुदायका बीच सहजीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने छ ।
सामुदायिक संगठन र सशक्तिकरण
५४ तीन बर्षमा गाउँपालिकालाई लैङ्खिक विभेद, बाल विवाह छाउपडी कुप्रथा र जातीय छुवाछुत मुक्त क्षेत्र बनाईन छ । सबै प्रकारका सामाजिक विभेदमुक्त गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरी सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण समाजको विकास गरिनेछ ।
५५ सामाजिक विकासलाई स्थानीय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
५६ बाल समूहहरु, महिला अधिकार मन्चहरु, सामुदायिक वन समूहहरु, युवा समूहहरु, दलित समूहहरु, आमा समूहहरु, बचत तथा लगानी समुहहरु, सहकारी संस्था, नागरिक संगठनहरु, गैर सरकारी संस्थासँग स्थानीय विकासमा हातेमालो गरिनेछ ।
५७ अन्तरजातीय विवाहलाई सम्मान स्वरुप बिशेष अनुदान सहायता र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
५८ स्नातक तह माथिको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने दलित छात्राहरुलाई पालिकाकै लगानीमा पढ्ने व्यवस्था गरिने छ । सुशासन र स्रोतको सदुपयोग
५९ सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकास, स्रोतको दिगो सदुपयोग गर्न नागरिक सशक्तिकरण गरिनेछ ।
६० गाउँपालिकाको पन्चबर्षिय आवधिक विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
६१ स्थानीय विकासमा सहकार्य र साझेदारीलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । सबै प्रकारका सार्वजनिक खर्चको सार्वजनिक सुनुवाई गरिने छ । सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सामुदायिक अंकप्रणाली लागू गरिनेछ ।
६२ गैर सरकारी संस्था, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट संचालन हुने विकास योजना स्थानीय तहको आवधिक योजनासँग समन्वय गर्ने र संयुक्त अनुगमन प्रणालीभित्र रहने गरी संचालन गरिनेछ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय र सबै सेवामुलक सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिरी र सिसिटिभिको व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ ।
अपाङ्खता सेवा–सामाजिक सम्मान
६३ शारिरीक अपांगतालाई कानुन अनुसार वर्गिकरण गरी सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
६४ अपाङ्खतामैत्री सेवा संचालनको लागि स्थानीय मानवस्रोत विकास गरिनेछ ।
६५ समूह (ग) मा पर्ने अपांगता भएकाहरुलाई पनि जीवन निर्वाह वापत आर्थिक सहयोग गरिनेछ ।
महिलाको घरायसी र प्रजनन् स्वास्थ्यसग सम्बन्धित कामको सम्मानजनक गणना
६६ महिलाको कार्यबोझ कम गर्न ओखलको सट्टा घरघरमा ढिकी, सामुदायिक कुटानी मिलको स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
६७ प्रजजन् स्वास्थ्य, घरभित्रका कामको आर्थिक योगदानमा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
६८ लैंगिक बजेट निर्माण, महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलनका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
सच्चा मानव प्रेम नै हो धर्म – असल संकृतिमा हुन्छ सत्कर्म
६९ तीन बर्षमा विर्जयामाण्डू, ज्यूलेकमाण्डु, वडालेक, वथानलेक, मष्टामाण्डांै, धौलछडा, गल्लेकीमष्टा, कुन्नालठाना, नवाकुण लगायतका अन्य स्थललाई धार्मिक पर्यटन स्थलका रुपमा विकास गरिने छ ।
सूचना, प्रविधि, ईन्टरनेट र संचार
७० दुई बर्षमा सूचनामा जनताको पहुँचमा विकास गर्न बिद्यार्थीलाई ई–पुस्तकालय, किसान र उद्यमीका लागि टेलिसेन्टर सेवा संचालन गरिने छ ।
७१ छेडेदहमा सामुदायिक रेडियो, युवा सूचना स्रोत केन्द्र संचालन गरिनेछ ।
२७ प्रभावकारी सञ्चार सेवाका लागि फोर जी सुबिधा सहित टेलिफोन सेवाको बिस्तार गरिने छ ।
७३ तीन बर्षमा विभिन्न बिद्यालयमा रहेका खेल मैदानको स्तरोन्नती गरिने छ ।
७४ चुल्ठे र छेडेदहमा साझा सम्मान पार्क निर्माण गरिने छ ।
७५ ४५ टोलमा बालक्रिडास्थल निर्माण गरिने छ ।
७६ दशरथ मा.वि.को खेल मैदान निर्माण कार्य पूरा गरी आवासिय सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
७७ पालिका भित्र क्रिक्रेट मैदान निर्माणको सम्भाव्यता अध्यायन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
७८ वर्षमा एक पटक क्रिक्रेट, फुटबल र भलिबल खेलका खुला प्रतियोगिता आयोजना गरिने छ । खेलाडीहरुको लागि नियमित प्रशिक्षणमा लगानी गरिने छ ।
७९ विभिन्न प्रकारका रोजगारमुलाक, कृषि, उद्यम तथा अन्य सवामुलक कामको वर्गीकरण गरी विशिष्टीकरण गरिनेछ । सोही अनुसार काम गर्ने अनुमती–पत्र, सेवाबाट अवकाश लिंदा आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा र आत्मसुरक्षा
८० प्रहरी सेवा र समुदायको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाइनेछ ।
८१ संचार सेवा, यातायातका साधन उपलब्ध गराई स्थानीय प्रहरीचौकीहरुको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।
८२ आटीचौर र काँडा प्रहरी चौकीका भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका थप उपाय अबलम्वन गरिनेछ ।
८३ किशोरीहरुको आत्मसुरक्षाका लागि सीप विकास गरिनेछ ।
८४ जातीय विभेद उन्मुलन गर्न विशेष अभियान संचालन गरिनेछ ।
८५ तीन वर्षमा पालिका स्तरमा एउटा अनाथाश्रम र एउटा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
८६ अशक्त र उमेरको कारण बैंक सेवा लिन नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि नजिकको बैंकसँग समन्वय गरिनेछ ।
८७ विकासका अवसरहरुको अभिबृद्धि गरी बढीभन्दा बढी जनतालाई लाभान्वित गर्न नेपाल सरकारले तोकेका नीतिसम्मत आधारमा गाउँपालिकाका वडा संख्या बृद्धि गरिनेछ ।
गाउँपालिका संचालनको व्यवस्थित प्रक्रिया–नीति र योजना निर्माणमा जनता सक्रिय
८८ जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको बिस्तार गरी स्थानीय राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइ संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने समायोजन कोष बृद्धि गरिनेछ । पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट संचालन हुने विकास–निर्माणका विशेष कार्यक्रमको परिणाम उच्च बनाइने छ ।
८९ गाउँ परिषद्बाट डल्लो बजेट पारित गराएर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायत केहि वर्चस्व राख्ने पार्टी नेताको निर्देशनमा मनलाग्दो बाँड्ने चलनको अन्त्य गरिने छ । वडाका योजना गाउँपालिकाको आवधिक योजनामा समावेश गरेर विनियोजन गरिनेछ ।
९० विकास निर्माण कार्यको अनुगमन प्रक्रियाको विधि तयार गरी व्यवस्थित गरिनेछ । डिजाइन अनुसार गुणस्तरीय कार्य भए, नभएको प्राविधिकको रोहवरमा अनुगमन गरेर मात्र योजनाको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
९१ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समिति लगायतका सबै समितिहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन विशेष योजना तयार गरी क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।
९२ गाउँपालिकामा रहेका पूर्व जनप्रतिनिधी, बुद्धिजीविहरुको अनुभवीय सुझाब लिई विकास योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९३ गाउँपालिकामा बनेका ऐन, नियम आवश्यकतानुसार संशोधन र नयाँ निर्माण गरी संस्थागत गरिनेछ ।
९४ असल संस्कृतिको (देउडा, माँगल आदि) को संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि विद्यालय तह देखि नै सामाजिकीकरण गरिने छ ।
९५ पालिकाको समग्रह विकासका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधीत्व हुने गरि ‘विकास विज्ञ समिति’ गठन गरिने छ । सोही समितिसँगको परामर्श र सल्लाह अनुसार नै पालिकाको विकास खाका तयार पारिने छ ।
अन्तमा, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा विगत पाँच वर्ष नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधीले पालिका संचालन गरेको सर्वविदितै छ । निर्माण कार्य र बजेट विनियोजनमा भएको अनियमितता, कमिशन, असन्तुलित बजेट विनियोजन गरिएको विभिन्न माद्यमबाट सार्वजनिक भैसकेको छ । गाउँपालिकाभित्र कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरु बीच राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी व्यवहार गरिएको चर्चा जताजतै छ । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई खप्तड छेडेदहको कार्यजिम्मेवारी संचालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा विगत पाँच वर्षको खर्च विवरण जनता समक्ष सार्वजनिक गरिने छ । कानुन विपरित भए, गरेका खर्चको सोधखोज गरिनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो गाउँटोलबाट सक्षम, योग्य, ईमान्दार, लगानशील र स्थानीय विकासको लागि योजनाकारको टिम निार्वचित गरी आफ्नो विकासको लागि आफै नेता बन्ने अवसर हो । २०७९ बैशाख ३० गते हुने खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी ने.क.पा. (एमाले) का उम्मेद्वारलाई अत्याधिक मतले विजय गराउन गाउँपालिकाका सम्मानित सबै मतदातामा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । नेकपा (एमाले) खप्तड छेडदह गाउँपालिकाको न्याय, समानता र समृद्धिको अगुवाई गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । हार्दिक अभिवादन सहित,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) – जिन्दावाद ।
जनताको वहुदलीय जनवाद – जिन्दावाद ।
शनिबार १०, बैशाख २०७९ ०८:१७ मा प्रकाशित